Nyamavhuvhu 6, 2018 arun
Indian Hurumende vadyidzani Mahindra Corp. kuvaka “blockchain dunhu”
State hurumende kuIndia kushanda pamwe vemarudzi akasiyana-siyana IT mabasa hofori kuvaka yoruwa mukati renyika yakatsaurirwa kuna blockchain startups. The IT dhipatimendi Telangana hurumende wehurumende iri kushanda pamwe Tech Mahindra, munhu dziri pachena yakasimba kudzimbahwe India, kuti vachaona maviri teaming kundovaka chii vanoti vachava vokutanga kuva nyika “blockchain dunhu.”
The blockchain dunhu achava nenzvimbo imwe nzvimbo mukati Hyderabad - hurumende kuti guta guru - zvivako mumuviri neimba uye incubate blockchain startups kubva India sechikamu nehurumende kusunda mberi Tech kukura. Both Telangana & ari pedyo mamiriro Andhra Pradesh vari kuongorora blockchain zvigadzirwa kuti digitally rework nyika yavo registries & vaviri vachangobva vakatanga kuva blockchain mararamiro.
52 Quintillion por wechipiri: Bitcoin hashrate inotanga chinyorwa itsva
Bitcoin kuti samambure hashrate kwakasvika mutsva chinyorwa mukuru svondo rino, kuudzwa kukurudzirwa indasitiri vatsoropodzi sezvo hwokugadzira rutsigiro richikura exponentially. Data kubva Blockchain (aimbonzi Blockchain.info) rinobvuma kuti kuitika hashrate yasvika 52 quintillion hashes por wechipiri.
Senzira kuenzanisa, uwandu jecha Panyika riri kumativi 7 quintillion. The Blockchain date inosimbisa munhu 60% kuwedzera kare mitatu chete. Ichi chinoratidza nguva yokutanga Bitcoin yasvika pachikumbaridzo ichi munhau yacho.
mabhanga Thailand vanogona zvino akazaruka subsidiaries mari mu cryptocurrencies
The Bank of Thailand (Bot), munyika Central Bank, anonzi akapa zvose vemo mari kumasangano mvumo vomurova subsidiaries kuti bhizimisi mu cryptocurrencies kuti vangapawo brokerage mabasa crypto dealers. mabhanga Thailand kuchaita zvino kupa brokerage mabasa kumakambani crypto-chokuita, vanopedzisira crypto uye blockchain startups, kana kunyange ishande crypto mabhizimisi avo, maererano chiziviso ichangopfuura nokuda Bot.
Asi mabhanga omunharaunda uye avo marezinesi subsidiaries tiri havabvumirwi kutenga, tengesa, kana zvokutengeserana cryptocurrencies akamiririra makasitoma avo. wo, mabhanga Thailand anogona chete kushanda pamwe crypto yemakambani nokudzorwa nyika kuchengetedzeka uye Exchange Commission (Thailand raMwari SEC) uye Office Inishuwarenzi Commission (OIC). Zvinoshamisa, rakazvimirira digitaalinen mari exchanges zvinogona pamutemo muna Thailand Wapedza revavhoti. Pachishandiswa kuitika izvi, ikaramba zviremera Thailand vanogamuchira kuti Virtual cryptocurrency musika.
Chechipiri pakukura German Stock Exchange inozivisa "mugumo-to-mugumo" cryptocurrency kwezvivako
Mushure kusika BISON crypto-kutengesa Anwendung, wechipiri pakukura Stock Exchange muGermany anoramba kugamuchira cryptocurrency wayo kwazvo achangodarika chirongwa. Boerse Stuttgart ari kutanga kutengesa vakatozodzokera, uye ubatwa, nokuti cryptocurrencies uye anoenderana mabasa & pamutemo akazivisa "Boerse Stuttgart Group ari kusika achagumisa-to-magumo kwezvivako nokuda digitaalinen zvinhu. Atanga cryptocurrency wokutengesera Via BISON, nokukurumidza kuchava… munhu multilateral zvokutengeserana vakatozodzokera cryptocurrencies uyewo negadziriso yakachengeteka vachichengetwa.”
The BISON App wakakodzera kanda matsutso ichi kufambisa musika kuwana uye kubvumira vakasununguka uye yakachengeteka zvokutengeserana pamusoro cryptocurrencies, zvichiita wokutanga Anwendung munyika kuti kunotsigirwa bhurasho Stock Exchange. pakutanga, ari Anwendung achatsigira BTC, LTC & vamwe. The zvokutengeserana vakatozodzokera digitaalinen yesangano vakaita BTC achaita vanoumba nezvemamwe mugumo-to-mugumo kwezvivako. CEO pamusoro Boerse Stuttgart GmbH, Alexander Höptner akati "Tiri kugamuchira zvinoda kubva chitoro uye masangano vanoita kuti yaidzorwa uye yakavimbika zvakatipoteredza vanotengesa pamwe cryptocurrencies.” Pavaichengetwa mabasa ichasanganisira kusiyaniswa kuchengeteka pfungwa kuti digitaalinen zvinhu uye ndichava kare awanike pamwe kushanda BISON wokutengesera App.
Hey Altcoin Daily Team, John M...
Bitcoin News - Amazon, Maruta, ...
Major Altcoin Update! vara, Ca...
Previous Post:Blockchain News 03.08.2018
Next Post:Blockchain News 07.08.2018